Man United oo u soo baxday wareega afaraad ee koobka FA Cup, kaddib markii ay ka reebtay Wolverhampton… +SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 16 Jan 2020. Manchester United ayaa u soo baxday wareega afaraad ee koobka FA Cup, kaddib markii ay ka reebtay kooxda Wolverhampton oo ay kaga adkaatay 1-0, xilli kulankan uu ahaa kulan ku celis ah wareega saddexaad ee tartankan, kaddib markii kulankii lugta hore ay ku soo kala baxeen bar-bardhac 0-0 ah.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay bar-bardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 67-aad kooxda Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-0 ka dhigay Juan Mata, kaddib markii uu si qurux badan kaga caawiyay goolkan saaxiibkiis Anthony Martial.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 1-0 ay kaga adkaatay Man United kooxda Wolverhampton oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford, waxayna Red Devils u gudubtay wareega xiga ee afaraad tartanka FA Cup.
Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican Belgium oo lagu dhawaaqay… (Lukaku, De Bruyne mise Hazard?)